South Africa launches drive to vaccinate 500,000 in 2 days - Boys & Girls Clubs of Senegal
South Africa’s President Cyril Ramaphosa, waves as he leaves after visiting a vaccinating centre during the inaugural vaccination weekend drive in Katlehong, east of Johannesburg, South Africa Friday, Oct. 1, 2021. The aim of the vaccination drive is to mobilise citizens and people living in South Africa to get vaccinated as a means to fight the COVID-19 pandemic. Credit: AP Photo/Themba Hadebe
Community members watch as South Africa’s President Cyril Ramaphosa, addresses them about the importance of vaccinating during the inaugural vaccination weekend drive in Katlehong, east of Johannesburg, South Africa Friday, Oct. 1, 2021. The aim of the vaccination drive is to mobilise citizens and people living in South Africa to get vaccinated as a means to fight the COVID-19 pandemic. Credit: AP Photo/Themba Hadebe
South Africa’s President Cyril Ramaphosa, right, poses for a selfie with a healthcare worker during the inaugural vaccination weekend drive in Katlehong, east of Johannesburg, South Africa Friday, Oct. 1, 2021. The aim of the vaccination drive is to mobilise citizens and people living in South Africa to get vaccinated as a means to fight the COVID-19 pandemic. Credit: AP Photo/Themba Hadebe
South Africa’s President Cyril Ramaphosa, greets a passengers through the minibus window during the inaugural vaccination weekend drive in Katlehong, east of Johannesburg, South Africa Friday, Oct. 1, 2021. The aim of the vaccination drive is to mobilise citizens and people living in South Africa to get vaccinated as a means to fight the COVID-19 pandemic. Credit: AP Photo/Themba Hadebe
South Africa’s President Cyril Ramaphosa, gestures as he arrives at a taxi rank to addressing the community about the importance of vaccinating during the inaugural vaccination weekend drive in Katlehong, east of Johannesburg, South Africa, Friday, Oct. 1, 2021. The aim of the vaccination drive is to mobilise citizens and people living in South Africa to get vaccinated as a means to fight the COVID-19 pandemic. Credit: AP Photo/Themba Hadebe
South Africa’s President Cyril Ramaphosa, and officials watch as the Ekurhuleni Mayor Mzwandile Masina, sited, getting ready to receives his second Pfizer vaccine jab from a healthcare worker during the inaugural vaccination weekend drive in Katlehong, east of Johannesburg, South Africa Friday, Oct. 1, 2021. The aim of the vaccination drive is to mobilise citizens and people living in South Africa to get vaccinated as a means to fight the COVID-19 pandemic. Credit: AP Photo/Themba Hadebe
South Africa launches drive to vaccinate 500,000 in 2 days (2021, October 2)